Akukho mfihlelo yokuba kwinkqubo yokukhula komntwana, ukuphuhliswa kwesimo sakhe kunye ne-psyche nayo iyenzeka. Inxaxheba ekhethekileyo ekulandelelweni nasekuphuhliseni iinkqubo zengqondo ngexesha lokuqala, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka inikezelwe kwingcamango yomntwana. Emva kwakho konke, ukuziphatha komntwana kunye nokwazisa oko kwenzekayo kubangelwa kukujonga kwehlabathi elikujikelezile. Ngokomzekelo, unokwazi ukubhala kwimemori yendoda encinane, kuba imemori yengane kukubona abantu abasondeleyo, imvelo kunye nezinto, yabo imbono. Nokuba ukucinga kwabantwana ukuya kwiminyaka emithathu kuhambelana nokuqonda, bayakuqwalasela oko kusemgangathweni wabo wombono, ngokufanelekileyo zonke ezinye izenzo kunye nezenzo nazo zihambelana noko umbonwa ngumntwana. Ndifuna ukuhlawula ngokukhethekileyo iinkalo eziphambili ezichaphazela ukuphuhliswa kwengcamango kubantwana.
Iimbono kubantwana abancinci zikhula kunye nendlela abaqala ngayo ukwahlula into enye kwenye, yenza enye into okanye enye into. Oogqirha bezilwanyana kunye neengcali zeengqondo zezingane zijolise ngakumbi kwizenzo, ezibizwa ngokuba zilungelelanisa, okanye izenzo ngezifundo eziliqela apho umntwana sele eqala ukuhlula phakathi kwefomu, indawo, uhlobo luni lokuthintela, njl njl. Xa ufunde ukuhlukanisa nokudlala ngezinto ezininzi ngexesha elifanayo, umntwana akakwazi ukuwacwangcisa ngokukhawuleza, umzekelo, ngesimo, umbala, nangakumbi nangentsingiselo.
Zininzi zamathoyizi ebantwaneni abancinci, njengama-cubes, iipiramidi, zenziwe ngokuchanekileyo ukuze umntwana afunde ukulungelelanisa izenzo. Kodwa ukuba ngandlela-thile angakwazi ukubona inani lezinto emva kwexesha, ngaphandle koluncedo lomntu omdala, akakwazi ukufunda ukwahlula ngombono, umbala okanye ifom. Ngako oko, kubaluleke kakhulu ukuqhagamshelana nabantwana kunye nabazali ngexesha le midlalo yomntwana, kuba ngexesha lemibala edibeneyo abazali abayalela ngayo umntwana ukulungisa izenzo, ukulungisa, ukunceda, ubonise indlela okufanele ukuba yintoni.
Nangona kunjalo, kukho imipu. Kungekudala okanye kamva umntwana uya kuqala ukuphinda emva kokuba unina okanye uyise, kwaye "uyazi" ukuba yiyiphi ikrabhu yokubeka, kodwa oku kuya kubangela ukuba izinto ezihambelanayo ziza kwenziwa kuphela phambi komntu omdala, kwaye emva kwakhe kuphela. Kubaluleke kakhulu ukuba umntwana ufunde ngokuzimelela ukwenza izenzo ezithile kunye nezinto, kuxhomekeka kwiimpahla zangaphandle. Ekuqaleni, inkunzi iya kuzama ukulungelelanisa inxalenye yepiramidi ngokungaqhelekanga, izame iindlela ezahlukeneyo, kwaye ukhangele ukuba i-element ayibambe okanye ayikho, i. Ngaba ufezekisa oko akufunayo okanye akunjalo.
Okanye mhlawumbi umntwana uya kuzama ngenkuthalo ukwenza into ayifunayo, kwaye ukuba oko akusebenzi, uya kuqala ukusebenzisa amandla angaphezulu kwenkqubo. Kodwa ekugqibeleni, emva kokuqinisekisa ubungenangqondo bezenzo zakhe, uya kuqala ukuzama ukufumana oko akufunayo ngenye indlela, ukuzama nokujika, umzekelo, into yepiramidi. Amathoyizi ngokwawo aklanywe ngendlela efana nokwazisa umncinci omncinci ukuba kufanelekile. Kwaye ekugqibeleni, isiphumo siya kufezwa, kwaye kamva sigxilwe.
Emva koko, kwikota yophuhliso, umntwana uvela kwizenzo eziqhelanisiweyo ukuya kwinqanaba elilandelayo apho uqala ukujonga ngokubonakalayo iipropati zezinto. Ngoko, kwinto yokuba umntwana ubona izinto, uqala ukwahlula iipropati zento ngokuhambelana noko akubukeka ngathi. Kwimizekelo yepiramidi efanayo, akayikuqokelela nje ukuba into enye ibanjwe kwenye, uzama ukuthabatha izinto zayo ngokuhambelana nesimo sayo. Uqala ukukhetha izinto ezingekhethwa ngokukhetha, kodwa ngeso, ukuhlukanisa umahluko phakathi kokukhulu nangaphezulu.
Ngeminyaka emibini nesibini isixa umntwana sele esele aqale ukukhetha izinto, egxininise kumzekelo onikwe wona. Unako ukukhetha nokungenisa ngokucela kwabazali okanye nabanye abadala ngokuthe ngqo loo cube, efana nekhampu enikezelwe yona njengomzekelo. Ingaba kunengqiqo ukusho ukuba ukhetho lwesifundo ngokubhekisele kwiimpawu ezibonakalayo, lo msebenzi unomsebenzi onzima kunokuba ukhethe ngendlela efanelekileyo? Kodwa nawuphi na umcimbi, ukuqonda komntwana kuya kukhula ngokubhekiselele kwimeko ethile, okokuqala uya kufunda indlela yokukhetha izinto ezifanayo okanye ubukhulu, kwaye kuphela ngokufanayo kumbala.
Ukufunda iincwadi kubantwana ebusuku
Indlela yokuxelela umntwana malunga nokufa komntu othandekayo
Izinkukhu zeenkukhu ngqolowa
Ziziphi iindlela ezingavunyelwe kumzabalazo wobunkokheli?
Ukuqokelela kwexesha lezityalo zeLouis Vuitton iTropical Journey 2016
Ukunyamekela iinwele ezilungileyo ekhaya
Ukwenziwa kwefestile yehlobo e-2015: iimeko ezikhoyo kunye neengcebiso zabapenzi
Izithembiso zokunikezelwa kuMnyaka omtsha
Ubisi lobisi kubantwana
Iingxowa zeTokotle kwi-glaze epholileyo